သင့်ရဲ့ Apple နားကြပ်ကို သီချင်းနားထောင်ဖို့အပြင် အခြားဘယ်လိုနေရာတွေမှာ သုံးနိုင်သေးလဲ? – Sunthit Myanmar
သင့်ရဲ့ Apple နားကြပ်ကို သီချင်းနားထောင်ဖို့အပြင် အခြားဘယ်လိုနေရာတွေမှာ သုံးနိုင်သေးလဲ?
သင့်ရဲ့ Apple နားကြပ်ကို သီချင်းနားထောင်ဖို့အပြင် အခြားဘယ်လိုနေရာတွေမှာ သုံးနိုင်သေးလဲ ဆိုတာသိကြရဲ့လား? Apple နားကြပ်လေးတွေက သင့်အတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၁။ သီချင်းနားထောင်ရင် ဒီတိုင်းပဲ သီချင်းအစီအစဉ်အလိုက် နားထောင်လေ့ရှိတာလား? မကြိုက်တဲ့သီချင်းဆိုရင်ရော မကျော်ချင်ဘူးလား? ဒါဆိုရင်တော့ Apple နားကြပ်လေးက Play/Pause ခလုတ်လေးကို နှစ်ချက်ဆက်တိုက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲနော်။
၂။ နားထောင်နေတဲ့ သီချင်းရဲ့ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးနေရာကို အမြန်ကျော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း နားကြပ်ရဲ့ Play/Pause ခလုတ်လေးကို နှစ်ချက်နှိပ်ရပါမယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင် ခလုတ်လေးကို အောက်ဘက်ကို ဆွဲချလိုက်ရင်တော့ သင်ကြည့်ချင်တဲ့ အပိုင်းကို ကျော်ကျော်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
၃။ သီချင်းတွေကို ရစ်ပြီးနားထောင်ချင်ရင်လည်း Play/Pause ခလုတ်လေးကို သုံးခါနှိပ်ပြီး အောက်ဘက်ကို ဆွဲချလိုက်ရုံပါပဲ။
၄။ နားထောင်ပြီးသွားတဲ့ သီချင်းကို ပြန်နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Play/Pause ခလုတ်လေးကို သုံးခါနှိပ်လိုက်ရင် နားထောင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးဆီ ပြန်ရောက်သွားမှာပါ။
၅။ ဖုန်းဝင်လာလို့ ဖုန်းမပြောချင်ဘူး ဖုန်းချချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Play/Pause ခလုတ်လေးကို နည်းနည်းကြာကြာလေး နှိပ်ထားလိုက်ရင် ဖုန်းကျသွားပါလိမ့်မယ်။
၆။ ဖုန်းဝင်လာရင်လည်း Play/Pause ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ဖုန်းဖြေနိုင်သလို ဖုန်းပြန်ချချင်ရင်လည်း အဲ့ဒီခလုတ်လေးကို ပြန်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
Categorized as Tech Tagged သင့္ရဲ႕ Apple နားၾကပ္ကို သီခ်င္းနားေထာင္ဖို႔အျပင္ အျခားဘယ္လိုေနရာေတြမွာ သံုးႏိုင္ေသးလဲ?